ကျွန်တော်နှင့် တိုင်ပတ်သွားသော HTC One ~ မိုးညိုသား
ကျွန်တော်နှင့် တိုင်ပတ်သွားသော HTC One
3:52 AM Android Root 1 comment
မင်္ဂလာပါ ဒီနေ့တော့ နဲနဲအားနေတာနဲ့ ဟိုတစ်နေ့က တိုင်ပတ်ခဲ့တဲ့ HTC One ရဲ့ဇတ်လမ်းလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် :D .. အဖြစ်က ဒီလိုပါ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးလာတယ် သူ Htc One ဝယ်မလို့တဲ့ မြန်မာဖောင့် သွင်းလို့အဆင်ပြေပါသလားဆိုတော့
ကျွန်တော်လည်း ရပါတယ်လို့ အာမခံလိုက်ပါတယ်. ညပိုင်းအလုပ်ပြန်ချိန်လည်းရောက်ကိုတော်ချောက ဖုန်းကိုလာပြီးပေးသွားပါလေရော.. ကျွန်တော်လည်းအေးဆေးပေါ့. အိမ်လည်းရောက်ရော လုပ်စရာရှိတာတွေ အကုန်လုပ်ပြီးတော့ HTC One လေးကိုကောက်ကိုင်ပြီးတော့ လုပ်ငန်းစပါတော့တယ်
Bootloader Unlock အရင်လုပ် တယ် အဆင်ပြေတယ် .. နောက်ပြီးတော့ CWM Flash လုပ်တယ် အဲအထိအဆင်ပြေတယ် .. နောက် Super User install လုပ်ပြီးတော့ Root ဖောက်လိုက်တယ် အဆင်ပြေပါသေးတယ်။။ ခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အဲဒီအဆင့်တွေကျော်သွားတော့ ပြီးသွားပြီပေါ့ မြန်မာဖောင့်ကတော့ အေးဆေး မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးအေးဆေးနေလိုက်တာ .. လုပ်စရာကျန်သေးတဲ့ အိမ်အလုပ်တွေနဲနဲ ထလုပ်လိုက်သေးတယ် ပြီးသွားတာနဲ့ ဖုန်းပြန်ကိုင်လိုက်ပြီး မြန်မာဖောင့်သွင်းလိုက်တယ်.. ပြဿနာက အဲဒီမှာစတွေ့တော့တာပဲဗျာ.. APK တွေကို Install လုပ်ဖို့လက်ခံတယ် Superuser ကလည်းအလုပ်လုပ်တယ် root access လည်းဖြစ်တယ် Font Folder မှာလည်း ဖောင့်ကဝင်တယ် ဒါပေမယ့် မြန်မာစာလုံးဝမပေါ်ပါဘူးဗျာ... နဲနဲတော့ခေါင်းခဲသွားပြီ အရင်ဖုန်းတွေတုန်းက အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့.. ဒါနဲ့နောက်တစ်ခု Zawgyi Changer နဲ့လုပ်တယ်မရဘူး.. ဒါလည်းလက်မလျှော့သေးပါဘူး ရှိသမျှ zawgyi changer အကုန်းလုံး apk , exe ရှိသမျှနည်းလမ်းအကုန်လုံးနဲ့လုပ်တယ် မရပါဘူး.. Root explore ကနေဝင်ပြီးတော့ fallback font ပါသွင်းတယ်မရပါဘူး.. ဒါနဲ့ဖုန်းးကို restore လုပ် Format ချ။။ ရှိသမျှအကုန်ပြန်ထည့် မရပါဘူး အဲဒါတွေနဲ့ချည်းပဲ သံသရာလည်နေလိုက်တာ မိုးလင်းသွားတဲ့အထိပါပဲ.. ဒါနဲ့တစ်ခုခုတော့လွဲနေပြီဆိုပြီးတော့ Google ကြီးကိုအကူအညီထတောင်းလိုက်ရပါတော့တယ်.. Google ထဲဝင်မိမှပဲ ကိုယ့်လိုလူတွေ အများကြီးဆိုတာ သွားတွေ့လိုက်ရတယ် အားတော့ ရှိသွားတယ် :P :P :P
ဒါနဲ့ ဟိုရှာဒီရှာ လုပ်လိုက်တာ မနက် ၇ နာရီထိုးမှပဲ XDA developer ဆိုဒ်ထဲကနေ mmfont.zip ဖိုင်လေးကို သွားတွေ့ပါတယ် .. ဒါနဲ့လက်တဲ့စမ်းကြည့်လိုက်တာ .. ဟော ထင်မထားပဲ လုံးဝအဆင်ပြေသွားပါတယ်ဗျာ.. .. ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ဒီပို့လေးကို ကျွန်တော့်လိုမျိုးတိုင်ပတ်နေသူများ ရှိရင် အဆင်ပြေပါစေဆိုပြီင်္းတော့ ဒီအကြောင်းလေးနဲ့အတူ လိုအပ်တဲ့ ဆော့ဝဲလ် တွေကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ.. အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ..
၀ါးခယ်မသား January 6, 2014 at 4:38 PM
SAMSUNG MINI ကို CWM Recovery ၀င်တာမရလို့ ကူညီပါ အကို